Kudhinda uye kunyora zvinyorwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Zvinyorwa uye Kunyora Nyaya
Kuongorora ngano yaKrylov "Oboz": basa rinoenderana nenyika yanhasi
Posted on 15.09.2019 30.12.2019
Kangani nguva isu takashamiswa nenziyo nhetembo dzaIvan Andreevich Krylov! Pazera rekuchikoro, vazhinji vedu taingoyemura kugona kwake kutora mifananidzo pakati pemhuka nevanhu, uye nemuenzaniso wengano dzake ...
Kuongororwa kwenhetembo yaZhukovsky "Izvo Zvisingataurike". Ungataure sei manzwiro ako mumashoko?
Posted on 15.09.2019 18.12.2019
Vasily Andreevich Zhukovsky akaunza gwara nyowani kumabhuku eRussia - kudanana, uko pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX kwakapararira muEurope chete. Mudetembi akatenda kureruka uye runako rwe nhetembo dzerudzi urwu uye ...
Voloshin Maksimilian Aleksandrovich: biography, yekugadzira nhaka, hupenyu hwomunhu
Posted on 15.09.2019 26.10.2019
Voloshin Maximilian (makore ehupenyu - 1877 - 1932) - mudetembi, muimbi, mutsoropodzi, mutsoropodzi wemabhuku. Voloshin ipseudonym. Zita rake chairo ndiKirienko-Voloshin. Upwere, makore emudzidzi Nyanduri wenguva yemberi akaberekerwa mu ...
"Gumi nembiri". Block. Pfupiso yenhetembo
Nhetembo yaBlok "VaneGumi neVaviri" yakagadzirwa nekukurumidza mushure mekuchinja kwechimvuramabwe kwa1918. Izvo zvakare zvairatidza zviitiko chaizvo (inotonhora nguva yechando, mabonfire pamharadzano, Red Army patrola mumigwagwa yeguta, kutaura, kwakajairika ...
A.S. Pushkin. "Nguva yematsutso! Runako rweziso. "
Posted on 15.09.2019 20.09.2019
Nhetembo ine mukurumbira "Autumn" (mune imwe vhezheni "Gumiguru yatouya ...") inozivikanwa kune wese munhu munyika medu. Zvichida kwete nemoyo, asi mitsara yakati wandei inodikanwa. Kana zvimwe zvirevo, kunyanya izvo izvo ...
Sei kunyora chinyorwa pane uzivi?
Posted on 15.09.2019 31.12.2019
Kufunga kwakanyorwa kunobatsira mukusimudzira kugona kwepfungwa, sekuburitsa pfungwa zvakajeka uye zvakajeka, zvichiteerana zvine musoro uye kuronga zvinhu. Unyanzvi uhu hunodzidziswa kuvadzidzi vachishandisa mhando yechinyorwa chakanyorwa senge ...
"Farewell, Russia isina kugezwa ..." Lermontov, "Farewell, Russia isina kugezwa": nhoroondo yekusika, kuongororwa kwenhetembo
Nhetembo "Farewell, Russia isina kugezwa ..." Lermontov akanyora mugore rekupedzisira rehupenyu hwake husati hwasvika. Panguva chaiyo yezuva rekunyora tarenda. Iyi mitsara sere yakapusa ingangoita ndima inozivikanwa kwazvo ...
Oster Gregory: kune vana vane rudo
Oster Grigory Bentsionovich anozivikanwa muRussia nenyika dzakavakidzana. Mabhuku akanyorwa naye anowanikwa mudzimba dzese dzinogara mwana. Ivo vari pane masherufu ezvose zvimwe kana zvishoma ...
M. Sholokhov, "Mugumo weMurume": Ongorora. "Jambwa remunhu": vatambi vakuru, dingindira, pfupiso
Muna Zvita 1956 naJanuary 1957, bepanhau rePravda rakaburitsa basa remunyori weSoviet Mikhail Aleksandrovich Sholokhov, Mugumo weMurume, pamusoro pemiedzo mikuru uye kusagadzikana kukuru kwevanhu veSoviet munguva dzakaoma ...
Pfupi biography yaRyleyev, mudetembi, ruzhinji rwevanhu, Decembrist
Ryleev Kondraty Fedorovich, ipfupi biography iyo ichakurukurwa pazasi, yakasiya chiratidzo chinoshamisa pane nhoroondo yeRussia nemabhuku. Ainyatsoziva A.S.Pushkin naA.S.Griboyedov, asi hukama hwavo hwaive hwakavakirwa pa ...
V.P. Astafiev, "Vasyutkino Lake": kuburikidza nemapeji ebasa
VP Astafyev ndomumwe wevanonyanya kunakidza vamiririri veRussia Soviet mabhuku. Izvo zvaive zvisiri zvemahara ivo vakamudaidza muyero wehana uye hunhu hwenguva yedu. Munhu uye zvisikwa, murume nehondo, hupenyu hwemusha, ecology ...
Arthur Conan Doyle, Nyika Yakarasika. Pfupiso
Kune ruzhinji rwevaverengi, Arthur Conan Doyle ndiye munyori wenyaya dzevatikitivha uye baba vevanyori vemutikitivha Sherlock Holmes. Asi paakaundi yake pane mamwe mabasa, kunyangwe asiri anozivikanwa se ...
Kutarisa, sincwain: mienzaniso yekushandisa mune zvidzidzo zveRussia mutauro uye mabhuku
Iyo yazvino nzira yekudzidzisa zvechikoro kuraira inoda kuti chidzidzo chizadzwe nezvinhu zvekuziva zvakanyanya sezvinobvira, kuitira kuti mudzidzi agone kutora kubva mairi kwete chete imwe muzana yeruzivo rutsva neruzivo, asi zvakare hunyanzvi. ...
Pfupiso ye "The Snow Queen" naHans Christian Andersen
Posted on 15.09.2019 23.10.2019
Kwezvizvarwa zvakawanda zvevaverengi, iyi ngano yave uye inoramba iri imwe yevanodiwa kwazvo. Pfupiso ye "Snow Mambokadzi" nemunyori wechiDanish Hans Christian Andersen anogona kudzokororwa nemwana chero mukuru uye mukuru, nekuda kwevakawanda ...
"Mhumhi iri mudanga." Ngano naIA.Krylov
Kwakadaro mabhuku Genre sezvo ngano yakatanga makore 4000 apfuura. Imwe nyaya yekunyepedzera ine hungwaru ine pfungwa huru - hunhu. Rudzi urwu rwakaunzwa mumabhuku eRussia uye rukamutsiridzwa naIvan Andreevich Krylov. Kana…
"Ngarava iri yoga inopenya": pfupiso uye kuongorora nhetembo yako yaunofarira
Pasina mubvunzo, M. Yu.Lermontov ndeimwe yemhando dzakanakisa dzenhetembo dzeRussia nemabhuku zvakawandisa. Kugona kwake kweshoko, nhetembo dzemitsetse uye kusuwa kusinganzwisisike mumutsara wega wega zvakasanganiswa nekunakidzwa ...
A. Pushkin, "Kureurura": kuongororwa kwenhetembo
Alexander Sergeevich Pushkin akanyora "Kureurura" aine makore makumi maviri nemanomwe. Nhetembo iyi yakatsaurirwa kune imwe yemimhanzi yake yakawanda - Alexandra Osipova. Kufanana nevamwe vanhu vazhinji vekusika, Pushkin aive nerunyoro rwakawandisa ...
Ongororo yakadzama yenhetembo. Balmont "Verbalism"
Constantin Balmont ainyanya kufarirwa panguva imwe chete. Rudzi rwechidiki, rwakada kuongorora nekufungisisa, rwainyanya kufarira nhetembo yake. Mabasa aBalmont akazadzwa nerudo uye rwiyo, iwo akazadzwa nehunyoro uye hudiki ...
Andrey Usachev - munyori wevana, mudetembi nemunyori prose
Posted on 15.09.2019 13.01.2020
Andrey Usachev - munyori wevana, mudetembi uye munyori weprozi. Akaonekwa mumatanho ekunyora panguva dzakaoma, apo nhetembo dzese dzakanaka dzakagadzirwa uye nziyo dzese dzakanyorwa. Mumwe munyori pane yake ...
M. Yu. Lermontov. Chokwadi chinonakidza kubva kuhupenyu hwemunyori
Posted on 15.09.2019 09.01.2020
Kune anopfuura chizvarwa chimwe chete chevanhu vanoda zvinyorwa zveRussia, hupenyu hwaMnu Yu Lermontov hunofadza. Dzimwe dzenguva dzake dzichiri dzakavanzika. Uye zviitiko zvakawanda, kana zvakafukidzwa, saka ...
peji 1 peji 2 ... peji 12 Next Page
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,438 masekondi.